Tsy kajim-bahoaka fa kajy politika | NewsMada
Mahaiza mifidy e ! Io ny fotoana hanehoantsika ny hevitsika e ! Ho hitan’ny havany eo izay halam-bahoaka e ! sns ! Vao nipaika ny voalohan’ny taona 2018, zary resaka nameno ny lalambe sy ny isam-pianakaviana ny tahaka ireo. Toa mitory fanantenana sahady fa hanana mpitondra olom-banona i Madagasikara atsy ho atsy. Tsara ny manantena, saingy tsy azo hadinoina fa tsy olona tokana na firenena iray no voakasiky ny fifidianana eto Madagasikara fa maro.
Tsy hitazam-potsiny ireo firenena vaventy zatra mitsentsitra sy mitavana ny harem-pirenena malagasy. Tsy maintsy hiaro ny tombontsoany izy ireo. Mila mametraka mpitondra mpivarotra tanindrazana sy azo vidiam-bola, tsy matahotra an’Andriamanitra, mpamadika ny mpiray tanindrazana aminy, sns. Efa zary resabe aza ny filazana fa tsy tafapetraka eo amin’io seza io raha tsy mahazo tsodrano avy any amin’ireo firenena vaventy ireo.
Tsy hijanona hanabe takolaka fotsiny ihany koa ireo mpanefoefo sy vondron’ny mpanam-bola afaka mibaiko ny mpitondra fanjakana sasany nifandimby teto hatramin’izay fa tsy maintsy manana ny olona hotohanany. Izay afaka miaro ny tombontsoany, izay no heverin’izy ireo fa mendrika ny hitondra.
Diniho amin’izay ary ny karazan-kajy manodidina io fifidianana hotontosaina amin’ity taona ity io. Vinavinaina ho 10 tapitrisa ny Malagasy hifidy. Raha isa, tena goavana tokoa ny lanjan’ny safidin’izy ireo… Saingy, sanatria, mety ho be tsy ahoana ihany manoloana ny baikom-bazaha sy ny tsindrin’ny mpanam-bola.
… Tranga tahaka io hatrany no mahatonga fahadisoam-panantenana eo amin’ny Malagasy. Tsy ny safidiny no tanteraka fa ny safidim-bazaha sy ny safidin’ny mpanam-bola. Rahoviana ary vao ho afa-bela amin’ireo ny Malagasy ? Rehefa mahatsiaro tena ny tsirairay fa Malagasy izy, ary azy i Madagasikara sy ny momba azy rehetra… Miainga avy amin’izay ny zava-drehetra !